एमसीसी पास नहुँदै फिल्डमा खटियो अमेरिकी सेना ! नेपाली सेना मौन « Supremekhabar
प्रकाशित मिति : २०७८, श्रावण, २६, मंगलवार ०७:३७
काठमाडौं : राजनीतिक दलका नेताले परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधिबिना विदेशी कूटनीतिक नियोगका अधिकारीसँग भेटे भने मर्यादा मिचियो भनेर कराउने मिडियाहरुलाई पनि थाहा छैन, हाम्रो देशमा स्वास्थ्य, परराष्ट्र र रक्षाको सूचनाबिनै विदेशी सेनाले काम गरिरहेको छ । विषय नराम्रो हैन, कोभिड संक्रमण व्यवस्थापनका लागि अमेरिकी सेनाको टोली ४७ लिटर क्षमताका ४४ सय सिलिण्डरसहित जिल्ला जाँदैछ । मानवीयता, स्वास्थ्य संवेदनशीलताका दृष्टिले यो प्रशंसायोग्य कार्य नै हो । तर, विधि, पद्धति भएको देशमा विदेशी सेना यसरी तलसम्म जान लाग्दा नेपाली सेना भने प्रतिक्रियाविहीन अवस्थामा देखिन्छ ।
प्रवक्ता कृष्ण पौडेल भन्छन्, ‘हामीलाई कसले सोध्छ र ! जनआस्थाले रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण ज्ञवालीलाई सोध्दा मन्त्रालयलाई यस विषयमा कुनै जानकारी नरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीलाई यसबारे केही जानकारी छैन, परराष्ट्रसँगको समन्वयमा भएको होला कि ? त्यसो त यसअघि सीधै भारतीय परियोजना भित्रिएको इतिहास छ । विभिन्न शीर्षकमा भारतीय राजदूतावासले सीधै पाँच करोडसम्म चाहेका प्रत्येक ठाउँमा वितरण गर्नसक्छ ।